सिंगापुर पुलिस निमेशले जिते चीनमा तेस्रो स्वर्ण « News24 : Premium News Channel
काठमाडाैं । चीनको छेन्दुमा भइरहेको विश्व पुलिस एन्ड फायर गेम्समा नेपाली धावक निमेश गुरुङले तेस्रो स्वर्ण जितेका छन्। सिंगापुर पुलिस फोर्समा कार्यरत उनले आफूले भाग लिएका तीन वटै विधामा स्वर्ण जित्ने क्रममा आइतबार १० हजार मिटर दौडमा पनि स्वर्ण जितेका हुन्। प्रतिस्पर्धामा विभिन्न देशका ५५ खेलाडीले भाग लिएका थिए।
निमेशले निर्धारित दूरी ३१ मिनेट १७ सेकेन्डमा पार गर्दै स्वर्ण जिते। उनले चीन र भारतका खेलाडीलाई पछि पारेका थिए। दोस्रो भएका रेलवे पुलिस चीनका जेनुफेङ दाईले ३१ मिनेट ३५ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए।भारतीय राष्ट्रिय पुलिसका गोभा रामले ३२ मिनेट २१ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेर कास्य पदक हात पारे।
सिंगापुर पुलिस फोर्समा कार्यरत भए पनि निमेश नेपाली पासपोर्ट बोक्छन्। जसकारण पदक तालिकामा उनको परिचय नेपाली भनेर उल्लेख गरिएको छ। उनले गत आइतबार भएको १० हजार मिटरको क्रस कन्ट्री इभेन्टमा पनि स्वर्ण जितेका थिए।
सो प्रतिस्पर्धामा उनले भारत र चीनका खेलाडीलाई पछि पारेका थिए। त्यसअघि उनले हाफ म्याराथनमा १ घन्टा ९ मिनेट २६ मिनेटमा निर्धारित दूरी पार गरेर स्वर्ण जितेका थिए।
पुलिस फायर गेम्समा विश्वभरका प्रहरीमा कार्यरत खेलाडीहरुको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। सन् १९८५ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको चीनमा १८औं संस्करण भइरहेको हो।एक दशकदेखि सिंगापुर पुलिस फोर्समा कार्यरत निमेशले सन् २०१७ मा अमेरिकाको लस एन्जलजसमा भएको अघिल्लो संस्करणमा पनि हाफ म्याराथन र १० हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका थिए।
नेपाली कांग्रेस : प्रमुख प्रतिपक्षी दल कि सरकारको सहयोगी पार्टी ?
अन्नपूर्ण र दामन घटना : पर्यटक सुरक्षामा कहिलेसम्म लापरवाही ?
हेटौंडामा ट्राफिक प्रहरीको ‘ड्रम कार्यक्रम’ले फ्लप खायो ! (फोटोफिचर)
सल्यानकाे सामुदायिक विद्यालयमा पहिलो पटक स्यानिटरी प्याड मेसिन जडान
नाइजेरियन नागरिकले २० वर्षदेखि हवाईजहाजको आकारमा घर बनाउँदै
access_time 10:06 pm
एजेन्सी, ०८ माघ । आफ्नो घर सुन्दर र आकर्षक होस् भन्ने चाहना सवैको हुन्छ ।
कैलाली, ०८ माघ । धनगढी उपमहानगरपालिका– १३ स्थित श्रीलङ्का गाउँमा आज एक महिलाको करेन्ट लागेर
काठमाडौं, ०८ माघ । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य धर्म– सरकारले गरेका गलत कामको